12 Arrin Oo Ay Tahay Inaad Ka Ogaato Xiisadda Turkiga iyo Mareykanka – Goobjoog News
Haddaba, Halkan Hoose Ka Akhriso, 12 Arrin Oo Ay Tahay Inaad Ka Ogaato Xiisadda Turkiga iyo Mareykanka
Andrew Brunson: Waa wadaad Mareykan ah oo 23 sano ku sugnaa Izmir, Turkiga, ninkan waxaa la xiray October 2016 kadib markii lagu eedeeyay inuu ku lug lahaa afgambigii dhicisoobey ee Turkiga iyada oo lagu eedeeyay Jaajuusnimo iyo inuu argigixiso taageerayey. Madaxweynaha Mareykanka Trump waxaa uu ninkan ku sheegay wadaad fiican, oo gardarro lagu xiray.
Fethullah Gulen: Dhinaca kale, Ankara waxa ay marar badan codsatay in loosoo dhiibo wadaadka Fethullah Gulen oo ah nin dhibaato badan ka geystay gudaha Turkiga, caq-qal joogta ahna ku haayo xasiloonida dalka Turkiga iyo dowladda uu hoggamiyo Erdogan. Turkiga waxa ay doonayaan in labada nin la isku badasho, laakin Mareykanka aya diidan.
Dhaqaalaha Turkiga: Xilliga la joogo ma xuma dhaqaalihiisa, oo sanadkii waxa uu sameeyaa kor u kac 3-4% ah, laakin Mareykanka waxaa uu ku hayaa cadaadis. Bangiga dhexe waxa uu diiday inuu fa’idada kor u qaado, taasina waxa ay leedahay sameynteeda.
Xiriirka Isra’il: Turkiga waxaa uu ku jiraa dalal yar oo muslim ah oo xiriir wanaagsan la leh Isra’il, Mareykanka waa ku qasban yahay inuu arrintaas ka fakiro.